अधिवेशनबाट व्यक्ति मात्र होइन, विचार पनि परिवर्तन हुन जरुरी छ
फरकधार / ५ भदौ, २०७८
फरकधारको यो शृंखलामा हामीले कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुसँग महाधिवेशनपछिको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ ? र, युवा नेतृत्वको सम्भावना के छ ? भनी सोध्ने छौँ । यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस पाल्पा​का सभापति वीरबहादुर राना​लाई हामीले यो शृंखलामा प्रस्तुत गरेका छौँ । )
मुख्य कुरा त अधिवेशन एउटा नियमित प्रक्रिया हो । यो अधिवेशनबाट व्यक्ति मात्र परिवर्तन हुनुहुँदैन । यो विचारको नेतृत्व देखिने बेला पनि हो । जुन विचारले आमनागरिकलाई विश्वासमा पनि लिन सक्नुपर्छ । पार्टीलाई पनि चलायमान र सशक्त बनाउने नेतृत्व खोजिनुपर्छ । प्रत्येक वडादेखि नै यो खालको नेतृत्व स्थापित गर्नका लागि हामी लागिपरेका छौँ ।
अहिले जनताको जीवनस्तरलाई हेरेर सांगठनिक संरचना बदल्नपर्ने बेला छ । युवा, महिला र हरेक जातजातिको नेतृत्व गर्नसक्ने वैचारिक नेतृत्व अहिलेको आवश्यकता हो ।
कांग्रेसमा युवा नेतृत्वको बहस चलिरहन्छ । एउटा कुरा के भने, युवा वा बुढा भन्नुभन्दा पनि हरेकको लगाव र क्रियाशीलताको विषयलाई मापदण्ड बनाउनुपर्छ । क्षमता भएको नेतृत्व चाहिन्छ । युवाहरुलाई कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल जरुरी छ । हरेक क्षेत्रका मानिसलाई समेटेर अघि बढ्नसक्ने नेतृत्व चाहिएको छ ।
संगठन संगठनको रुपमा स्थापित गर्नका लागि महिला, युवा, क्रियाशील, हरेक जातजाति क्षेत्र र लिंगका मानिसलाई समेट्ने नेतृत्व हुनुपर्छ । त्यो क्षमता युवा वा बुढा दुवैमा देखिन सक्छ ।
कुनै पनि व्यक्तिको लगानी वा त्याग तपस्यालाई अवलमूल्यन गर्न हुँदैन । उसको लगानीका आधारमा पाउने भूमिकाबारे गलत अर्थ लगाइनुहुँदैन ।
हिजो प्रतिपक्षमा पुगेको नेपाली कांग्रेसलाई आज थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने बेला छ । स्वाभाविक रुपमा अहिलेको परिस्थिति विषम छ । कोरोना र वर्षाका कारण अहिले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानसक्ने अवस्था छैन । संविधानले दिएको सुविधा हामीले प्रयोग गरिरहेका छौँ । त्यसकारण पनि अहिले अधिवेशनको विकल्प छैन ।
करिब दुईतिहाइ नजिक पुगेको कम्युनिस्टभित्रको समस्याका कारण देशको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी पनि कांग्रेसको काँधमा आइपुगेको छ । हामीले हिजो जसरी कांग्रेसको नेतृत्वमा संविधान निर्माण गर्यौं, त्यसको रक्षाका लागि पनि हामी बाहिर जाने अवस्था रहेन । विगतका सरकारका कमी–कमजोरीबाट पाठ सिक्दै कांग्रेस अघि बढ्नुपर्नेछ । रोग र भोकको चुनौतीका बीच अहिले कांग्रेसले आमनागरिकलाई खोपको व्यवस्थापन गर्ने काम छ । यहाँका श्रमिकलाई सम्बोधन गर्ने काम कांग्रेसले गर्नुपर्छ ।
यो संविधानलाई अक्षरशः रक्षा गर्ने जिम्मेवारी कांग्रेसको काँधमा छ । नयाँ शिराबाट कांग्रेस अघि बढ्नुपर्ने बेला छ । जहिले पनि अधिवेशनका बेला क्रियाशील सदस्यताको विवाद कुनै न कुनै ढंगबाट आइरहेको छ । यो राम्रो होइन । त्यसकारण हरेक व्यक्ति जिम्मेवार ढंगबाट लाग्नुपर्नेछ ।
क्रियाशील सदस्यतामा बढी नै तानातान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले यसलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बेला आएको छ । हरेक जिम्मेवार नेताले अधिवेशनबाट राम्रा मान्छे आउने वातावरण बनाउनुपर्छ । जसको कुनै भूमिका नै छैन त्यस्ता व्यक्तिलाई स्थापित गर्न लागियो भने त्यो राम्रो हुँदैन । यसलाई सल्टाएर अघि बढ्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति : भदौ ५, २०७८ शनिबार १७:२२:२९,